Fahafatesan’i Om-Gui : Misavoritaka ny tarika Ny Ainga -
AccueilVaovao SamihafaFahafatesan’i Om-Gui : Misavoritaka ny tarika Ny Ainga
Fahafatesan’i Om-Gui : Misavoritaka ny tarika Ny Ainga
Mitohy ny ady. Kihon-dalana lehibe teo amin’ny tantaran’ny tarika Ny Ainga ny fahafatesan’i Om-Gui tampoka ny jona 2016. Samy nanana ny nizorany ireo rahalahy mpikambana tao amin’ny tarika ka mizara roa ankehitriny ny tarika Ny Ainga. Samy milaza ho tarika Ny Ainga, na ny tarika iray tahirin’i Luc, na ny tarika faharoa ahitana an’i Dô sy Doda izay samy rahalahin’i Om-Gui avokoa. « Ireo miaraka amiko ireo no tarika Ny ainga napetrak’i Om-Gui, ary efa mipetraka eny anivon’ny ofisy malagasy misahana ny fizaka-manana na ny Omapi amin’ny anarako ny tarika Ny Ainga, araka ny hevitra avy amin’ny fianakaviana», araka ny fanazavan-dRabesaiky Luc Marie, lehiben’ny tarika Ny Ainga ahitana an’i Luc, Mika, Tyah ary Ntsanta miaraka amin’ireo mpitendriny. « Taorian’ny nahafatesan’i Om-Gui dia nandray ny fitantanana ny tarika Ny Ainga aho amin’ny maha zoky ahy. Nametraka ny fitsipika mba hifehezana ny tarika », hoy indray ny fanazavan-dRabesaiky Xavier Marie. Nanampy azy tamin’ny fitantanana ny tarika ny rahalahiny Rabesaiky Dominique Marie. Araka ny fazanavan’ireto farany, dia ny fametrahana izany fitsipika izany no nitarika ny fizarana sy ny fisamatsamahana teo amin’ny tarika. « Nisy mpikambana iray izay hita fa tsy mendrika ka tokony nesorina tsy ho mpikambana tao amin’ny tarika nefa tsy neken’i Luc, izay no nanombohan’ny disadisa», hoy hatrany ny fanazavan’i Dô. Ankoatra an’i Dô sy Doda dia mpihira fototra ao amin’ny tarika Ny Ainga io i Tantely.
Andriambavilanitra mpikambana ao kosa ry Tanya, Annicka, Aurea, Jonna ary Valérie. Samy milaza moa ny roa tonta fa efa mpitendry tao amin’ny tarika Ny Ainga hatramin’izay ireo miara-dia amin’izy ireo. Nanamarika anefa tetsy ankilan’izay i Dô fa misy amin’ireo hira noforonin’izy mirahalahy ireo no tsy azon’ny tarika Ny Ainga miaraka amin’i Luc atao na kaloina. Ohatra nomen’izy ireo tamin’izany ny « Ankoalabe », « Ampelasoa », « Mahery »…
Amin’izao fotoana, samy mandeha samy mitady ny tarika roa tonta. Raha milaza fa hankalaza ny faha-25 taonan’ny tarika ny tarika Ny Ainga miaraka amin’i Luc, dia nanamarika ry Dô fa isaka ny 10 taona hatramin’izay no nanamarihana ny fetin’ny tarika. Amin’ireo fampisehoana ataon’ny roa tonta dia samy mitondra ny anaran’ny tarika Ny Ainga ny roa tonta. Rabesaiky Luc Marie moa dia nilaza tamin’ny resaka nifanaovana taminy fa manao Usurpation na fisandohana ny tarika iray. Tantara mbola mitohy…